उराठलाग्दा भ्रान्तिहरू !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कार्तिक ७, २०७७ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — कसैलाई जागिर पाए कस्तो न हुन्छ भन्ने लाग्छ । पाएपछि जब आफूले सोचेजस्तो हुँदैन, जागिरप्रति नै नकारात्मक सोच आउँछ । तर टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बिहीबार बिहान भेटिएकी नर्स रिया गुरुङ खुसी थिइन् । उनका आमाबुबा काठमाडौं ढल्कोमा बस्छन् । दुई महिनादेखि भेट्न पाएकी छैनन् । तैपनि उनलाई कुनै गुनासो छैन ।
सम्झना आउँदा आमाबुबालाई भिडियो कल गर्छिन् । अस्पतालका दिनभरिका दुःखसुखका कुरा साट्छिन् । आमा, बुबा र आफन्तको खबर फोनबाटै लिन्छिन् । संक्रमितको उपचारमा खटिने कसम खाएर ६ महिनाअघि जागिर प्रवेश गरेकी उनलाई घरपरिवार सँगै नहुँदा होस् वा सँगै बसेर दसैं मनाउन नपाउँदा पनि दुःख लागेको छैन । जागिरप्रति वितृष्णा छैन । कोरोना संक्रमण बढेसँगै घरपरिवारबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई जागिर छाड्न दबाब हुन्छ । तर, उनी भने ६ महिनाअघि कोराना संक्रमितको मात्रै उपचार हुने टेकु अस्पतालको सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् ।
६ घण्टाको ड्युटी सकेर उनी घर जान पाउँदिनन् । होटलको कोठामा पुग्छिन्, जुन होटल अस्पतालले आइसोलेसनका लागि बुक गरेको छ । एउटा कोठामा दुई जना राखेको छ । होटलको खर्च अस्पतालले नै बेहोर्ने गरेको छ । अरू बेला घर नजाँदा खासै न्यास्रो नमानेका रियाका आमाबाबुले छोरी दसैंमा पनि नआउने भएपछि भने खल्लो मानेका छन् । ‘फोनमा चाडबाडका बेला पनि किन नआउने भन्नुभएको छ । घर आउँदा कोरोना सर्न सक्छ भनेपछि उहाँहरूले न्यास्रो मान्नुहुन्छ तर सम्झाइरहेको छु,’ उनले भनिन्, ‘नियमित बिरामीसँगै हुँदा कहिले त घरपरिवार पनि बिर्सन्छु । हामी सधैं संक्रमितका साथमा हुन्छौं । यदि मलाई संक्रमण भएको रहेछ भने त बुबाआमालाई सर्छ कि भन्ने डर हुन्छ । त्यसैले घर जान मन छैन ।’ सिकिस्तै भएर आइपुगेका संक्रमितलाई निको पारेर पठाउँदा आमाबुबाको न्यास्रोसमेत मेटिने उनले बताइन् ।
बिहीबार बिहानको आफ्नो पालो सकिएपछि उनले सँगै जागिर प्रवेश गरेकी सिरहाकी विद्या कार्कीलाई ड्युटी हस्तान्तरण गरिरहेकी थिइन् । कुन बिरामीको अवस्था के छ भन्ने विद्यालाई सुनाइन् । उनले पनि काठमाडौंको तीनकुनेमा रहेका आमाबुबालाई नभेटेको एक महिना भइसकेछ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिसिनबाट नर्सिङ सकेकी विद्याको पनि टेकुमा पहिलो जागिर हो । ड्युटी ‘हेभी’ भए पनि रमाइलो लागिरहेको उनले बताइन् । ‘पहिला १२ घण्टा ड्युटी हुन्थ्यो, अर्को दिन बिदा हुन्थ्यो । अहिले दैनिक ६ घण्टा गर्नुपर्छ, बिदा छैन,’ उनले भनिन्, ‘ड्युटी सकिएपछि घरमा होइन होटलमा जान्छौं । घरमा नगएको एक महिना भयो ।’ उनको पनि घरमा आमा र बुबा मात्रै छन् । ‘संक्रमित बढेपछि घर जान छाडेकी हुँ । पहिला दुई सातामा एकछिन बुबाआमा भेटेर फर्किन्थें । अहिले त फोन र म्यासेन्जरमा मात्रै भेट हुन्छ ।’ दसैंमा पनि उनको ड्युटीको पालो परेको छ । ‘घरबाट दसैंमा छुट्टी मिल्छ कि भन्नुभएको थियो मिल्दैन भन्दा आमाबुबा निराश हुनुभएको छ,’ उनले भनिन् ।
१७ औं निजामती सेवा दिवसमा उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीबाट पुरस्कृत अस्पतालको आईसीयू नर्सिङ इन्चार्ज उषादेवी देवकोटाको दैनिकी पनि उस्तै छ । दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी अस्पतालमा बिरामीसँगै हुने उनी चैतदेखि नै होटलमा बसिरहेकी छन् । प्रायःजसो उनी बिहान ६ देखि बेलुका ८ बजेसम्म अस्पतालमै हुन्छिन् । होटलमा बस्दा घरको काम बर्बाद भयो भन्ने गरेको उनले बताइन् । छोरीको न्यास्रो लाग्दा फोनमा गफिन्छिन् । दुई साता काम गरेपछि पीसीआर गर्दा नेगेटिभ देखिए घरमा परिवारलाई भेट्न जाने गरेको उनले बताइन् । ‘एक छुट्टै कोठामा बस्छौं फेरि फर्कन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘परिवारदेखि हामीलाई डर लाग्छ, हामीदेखि परिवारलाई ।’
अस्पतालमा जति पनि संक्रमित छन् उनीहरूलाई आडभरोसा दिने र उपचारको नेतृत्व गर्ने डा. अनुप बाँस्तोलाको सास्ती पनि अरूको भन्दा कम्ती छैन । बिहीबार त बिहानको खाना पनि बेलुका ५ बजे खाइरहेका थिए । बिहानै अस्पताल पुगेका उनले दिनभरि के गर्ने भनेर टिमसँग छलफल गरे । २१ जना आईसीयूमा र २० जना वार्डमा संक्रमित भर्ना भएका छन् । राउन्डमा उनीहरूलाई भेटे । ‘अरू बेला राउन्ड सकाएर खाना खान्थें आज त सीसीएमसीमा मिटिङ भएकाले त्यतातिर गएँ । खाना खानै बिर्सेछु,’ उनले भने । आकस्मिक कक्षमा ल्याएका तीन जनाको अवस्था बुझ्न उनी साँझ फेरि अस्पताल पुगे । ‘दिनभरि अस्पतालमै बिताएर घरमा आराम गरिरहेको हुन्छु । अस्पतालबाट बिरामीलाई समस्या भयो भनेपछि गाडीको गति बढाउँदै पुग्छु,’ उनले भने, ‘मुलुकमा संक्रमित देखिन थालेपछि कुनै पनि दिन बिदा बस्नसमेत पाएको छैन ।’
तस्बिर किरण पाण्डे/कान्तिपुर
सिकिस्त भएर आएका बिरामीलाई निको बनाउँदा उनी सबै दुःख भुल्छन् । सधैंजसो संक्रमितसँगै हुने भएकाले १५ महिने बच्चालाई समेत टाढैबाट हेरेर चित्त बुझाउँछन् । कोरोना सुरु हुँदा उनको बच्चा ६ महिनाको थियो, अहिले १५ महिनाको भइसक्यो । ‘यो अवधिमा उसलाई टाढैबाट हेरेर चित्त बुझाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘सधैंजसो संक्रमितसँगै हुने भएकाले परिवारदेखि टाढै बसिरहेको छु ।’ अस्पतालबाट फर्केपछि उनी माथिल्लो तलामा एक्लै बस्छन् । परिवारसँग पनि दूरी कायम गरेर भेट्ने गरेको उनले बताए । उनको घरमा ६७ वर्षे बुबा र ६५ वर्षीया आमा छन् । ‘उहाँहरूलाई कोरोना सर्नबाट जोगाउनु छ,’ उनले भने । परिवारले ल्याएर अलग्ग राखिदिएको खाना खाएर ड्युटी जान्छन्, अनि छुट्टै कोठामा सुत्छन् । कोरोना देखिएपछि जागिरको समय पनि निश्चित नभएको उनले बताए । उनी अस्पतालका प्रवक्ता पनि हुन् । जतिसुकै व्यस्त भए पनि कोरोनासम्बन्धी पत्रकारले राखेको जिज्ञासाको उत्तर दिन होस वा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई परेको समस्याको समाधान दिन पनि उनी भ्याउँछन् । अस्पतालमा कति बेड खाली छ ? भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार सोध्ने जानकारी दिन पनि उनले भ्याइरहेका हुन्छन् ।
राज्यका उच्च तहका व्यक्तिलाई संक्रमित हुँदा सबैले सम्झने उनै बाँस्तोलालाई नै हो । कतिपयले घरमै बोलाउँछन् । उनी सकेसम्म फोनबाटै समस्या समाधान गर्छन् । ‘पछिल्लो दिन त आईसीयू चाहियो भन्ने फोन बढी हुन्छ । बेड खाली छैन भन्दा साह्रै दुःख लाग्छ,’ उनले भने । संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने टिममा उनीसहित ११ जना कन्सल्ट्यान्ट छन् । डा. अनुपजस्तै अन्य १० जना कन्सल्ट्यान्ट र स्टाफ नर्सहरूले घरपरिवार बिर्सेर संक्रमितको उपचारमा मात्रै व्यस्त हुन्छन् ।
‘दिनभरि अस्पतालमा हुन्छौं,’ डा. शम्भु अधिकारीले भने, ‘राति होटलमा बसे पनि अनड्युटी भएकाले जुन बेला पनि जानुपर्ने हुन्छ ।’ अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मिहिनेतकै कारण भर्ना भएका सबैजसो बिरामीलाई निको पारेर पठाउन सकिएको बताए । ‘अस्पतालमा आवश्यक पर्दा जुन बेला पनि उपस्थित भएर काम गर्न हाम्रा टिम तयार छन्,’ उनले भने ।
अस्पतालको सेवाबाट प्रभावित भएकै कारण निजी अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीले समेत यहीं उपचार लिन पालोसमेत कुर्ने गरेका छन् ।
मलाई कोरोना देखिएपछि ५ दिनसम्म घरमै आइसोलेसनमा बसें । ज्वरो १०४ भन्दा घटेन । सास फेर्न पनि गाह्रो भएपछि टेकु अस्पतालको इमर्जेन्सीमा गएँ । मेरो सीटीस्क्यान, एक्सरे, ईसीजी तत्काल भयो । रिपोर्ट हेरेपछि तत्काल आईसीयूमा भर्ना गरियो । मेरो अवस्था गम्भीर भएपछि डाक्टर सबै जम्मा हुनुभयो । फटाफट उपचार भयो ।
अस्पतालको टिमवर्कबाट म साह्रै प्रभावित भएँ । स्टाफहरूको लगनशीलता देखें । मलाई राखेको कोठामा ६ वटा बेड थिए । एक जना बूढीआमै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूलाई खुवाउने, ट्वाइलेटको व्यवस्था गर्ने, प्याड फेरिदिन त्यहाँका स्टार्फ नर्सहरूले कहिल्यै झन्झट मानेको देखिएन । मलाई सरकारी अस्पताल सेवा कस्तो हुने हो ? भन्ने लागेको थियो, सोचेभन्दा धेरै राम्रो । यतिसम्म कि नर्सिङ इन्चार्ज आफैं सफा गर्नुहुन्छ । खाजा र खाना व्यवस्था उत्तिकै राम्रो छ ।
प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७७ ०८:०७